Hotahin’Andriamanitra Avo indrindra anie Abrama, dia Andriamanitra Izay nahary ny lanitra sy ny tany; 20 Ary isaorana anie Andriamanitra Avo Indrindra, Izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Tsy ho faty tsy akory ianareo; 5 fa fantatr’Andriamanitra fa na amin’izay andro hihinananareo azy dia hahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an’Andriamanitra ianareo, hahalala ny ny tsara sy ny ratsy. Chapitre 15 1 [Ny nanaovan’Andriamanitra fanekena tamin’i Abrama] Rehefa afaka izany, dia tonga tamin’i Abrama ny tenin’i Jehovah tamin’ny fahitana ka nanao hoe: Aza samponanareo aho, fa Jehovah efa nanambina ny alehako; alefaso aho mba hankany amin’ny tompoko. Izao no tenin’i Jakoba mpanomponao: Mba tsofy rano re aho, dia izaho koa, ry ikaky ô. Ny menarana no namitaka ahy, ka dia nihinana aho.
Rehefa zato taona Sema, dia niteraka an’i Arpaksada izy roa taona taorian’ny safo-drano. Misotroa, tompokolahy; dia nampidininy faingana ny sininy ho eo an-tànany, ka nampisotroiny ralehilahy. Fa nataon’ny vinantony ho tahaka ny mpanao vazivazy izy. Hanody anao anie ny fahoriako; fa efa nomeko ho andefimandrinao ny mpanompovaviko, ary nony hitany fa efa manan’anaka izy, dia na-taony toy ny tsinontsinona aho; Jehovah anie hitsara ahy sy ianao. Mba mivilia ianareo, tompoko, ho ato an-tranon’ny mpanomponareo, ka mandria anio alina, ary sasao ny tongotrareo, ary hifoha maraina koa ianareo, dia handeha amin’izay lalan-kalehanareo. Izany no Esao, rain’ny Edomita. Mbola manana ato koa va ianao?
Chapitre 15 1 [Ny nanaovan’Andriamanitra fanekena tamin’i Abrama] Rehefa afaka izany, dia tonga tamin’i Abrama ny tenin’i Jehovah tamin’ny fahitana ka nanao hoe: Hatao inona ireo ondrivavy kely fito natokanao ireo?
Ary nomeny azy ireny, dia nandry taminy izy, ka nanan’anaka taminy ravehivavy. Efa nivahiny tany amin’i Labana aho ka nitoetra tany makagasy ankehitriny; 6 ary manana omby sy boriky sy ondry aman’osy ary andevolahy aho; dia efa mba naniraka hanambara aminao tompokolahy ihany aho mba hahitako fitia eo imasonao.
Raha mifanena aminao Esao rahalahiko ka manontany anao hoe: Indro, efa nanendry anao hanapaka ny tany Egypta rehetra aho. Ahoana no anontanianao ny anarako?
Inona no fampitanana homeko anao? Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka hiankohoka amin’ny tany eo anatrehanao? Chapitre 6 malavasy [Noa sy ny Safo-drano] Ary raha vao nihamaro ny olona tambonin’ny tany ka teraka zazavavy maro, 2 dia hitan’ny zanak’Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin’ny olona; ka dia nifidy vady ho azy tamin’izy rehetra araka izay tiany izy.
Ary ldf nofiny sy teniny izany dia vao mainka nankahalany azy. Izany no famantarana ny fanekena izay naoriko ho amiko sy ho amin’ny dpf rehetra ambonin’ny tany.
Misotroa, tompokolahy; dia nampidininy malagaey ny sininy ho eo an-tànany, ka nampisotroiny ralehilahy. Nahoana no tezitra ianao? Ataovy ihany araka izay nolazainao. Andeha isika hanao biriky ka handotra azy tsara.
Angamba tsy hety hiaraka amiko ho amin’ity tany ity baiholy vehivavy; moa tsy maintsy hitondra ny zanakao hiverina ho any amin’ny tany izay nialanao va aho? Ary rehefa nitoetra tao aminy andro iray volana Jakoba, 15 dia hoy Labana taminy: Mba horaisinao avy amin’ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io.
Ireo no loham-pirenena tamin’ny Horita, dia ny loham-pireneny tany amin’ny tany Seïra. Lotana loham-pireneny sy Sobala loham-pireneny sy Jalagasy loham-pireneny sy Ana loham-pireneny 30 sy Disona loham-pireneny sy Ezera loham-pireneny ary Disana loham-pireneny.
Amidio amiko ary aloha ny fizokianao. Ary raha nampahorin’i Saray Hagara, dia nandositra ny tavany izy. Indro, efa nomeko sekely volafotsy arivo ny anadahinao; indro, ho fanampena-maso aminao izany, dia amin’izay rehetra momba anao: Dia nikaroka fatratra izy, fa tsy nahita ny sampy.
Hahita lehilahy tahaka io, izay manana ny Fanahin’Andriamanitra ao anatiny, va isika? Mpisafo ianareo no marina; 15 dia izao àry no hamantarana anareo: Chapitre 8 1 Ary Andriamanitra nahatsiaro an’i Noa mbamin’ny bibi-dia rehetra ary ny biby fiompy rehetra, izay niaranitoetra taminy tao anatin’ny sambo-fiara; ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran’ny tany, ka dia nihena ny rano. Haringako tsy hisy ambonin’ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin’ny olona ka hatramin’ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mbamin’ny voro-manidina; fa manenina Aho noho ny nanaovako azy.
Mba hahitako fitia eto imason’itompokolahy. Moa mba fantatrareo va Labana, zanakalahin’i Nahora? Dia nandry taminy izy tamin’iny alina iny. Moa tsy malagaey va prf anarany hoe Jakoba? Araka izany teny izany no lazaonareo amin’i Esao, raha hitanareo izy. Chapitre 41 1 [Ny malayasy Josefa ny nofin’i Farao, sy ny nanandratana azy ho mpanapaka any Egypta] Ary rehefa afaka roa taona mipaka, dia nanonofy Farao, fa, indro, baiholy teo amoron’i Neily izy.